January 2018 - RastraKhabar-Nepal's Popular Digital Newspaper
एक साता अघि हराएका जोन भेटिए
फुल्चोकीमा हिउँ हेरेर फर्किने क्रममा एक साता अघि हराएका १७ वर्षीय बालक भेटिएका छन् । उनी फुल्चोकी जंगलमा भेटिएका हुन् । उनलाई उपचारका लागि साँझ बीएण्डबी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
ललितपुरको थसिखेलस्थित अजय शिक्षा सदनको कक्षा ६ मा अध्ययन गर्ने जोन तामाङ गत बिहीबार साँझदेखि बेपत्ता भएका थिए । विद्यालयका प्रिन्सिपल दुर्गाबहादुर ओलीसहित ११ जना विद्यार्थी हाइकिङमा गएकोमा फर्किने क्रममा उनी बेपत्ता भएका थिए ।उनको खोजीमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र अभिभावकको टोली खटिएको थियो ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफुलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सुरक्षा माग गरेका छन् । डा. गोविन्द केसीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका भण्डारीले शान्ति सुरक्षा पाउँ भन्दै बुधबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन समेत दिएका छन् । भण्डारीसँगै डा. केसी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि जिप्रका पुगेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘मेरो ज्यानमा प्रधानन्यायधीशबाट खतरा भएको हुनाले मेरो ज्यूज्यानको सुरक्षा गरी पाउँ र मेरो ज्यू ज्यानमा तलमाथि भएमा गोपाल पराजुलीमाथि कानुनी कारबाही गरिपाऊँ ।’
दुवै मृगौला खराब भएर उपचार गराइरहेकी गायिका जलजला परियारको आर्थिक सहयोगार्थ चितवनमा माघ २७ गते सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण उपचार गराउन कठिन भईरहेको अबस्थामा पिडित गायिका परियारको आर्थिक सहयोग संकलन कार्यका निमित्त विभिन्न संघ संस्थाले अग्रसरता देखाएको छ । यसै क्रममा बेटर चितवन, मिस एसइइ स्टार चितवन तथा लिओ क्लब अफ नारायनगढ, चितवनले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्न लागेको सास्कृतिक कार्यक्रममा उठेको सम्पुर्ण रकम मृगौला रोगबाट पिडित जलजला परियारलाई हस्तान्तरण गरिने कुरा गायिका एन्जिला रेग्मीले बताइन । उक्त सहयोगार्थ सास्कृतिक कार्यक्रममा गायिका एन्जिला रेग्मी, गायक अफ्सर अलि, गायक अभिषेक भण्डारी, गायक सुजन चापागाई, गायक महेन्द्र बराल, गायक सुबास तिम्सिना तथा तथा गायिका सुजाता पाण्डेले आफ्नो आफ्नो प्रस्तुति दिने जानकारी कार्यक्रमकी अभियानकर्ता गायिका एन्जिला रेग्मीले गराइन ।
गायिका परियारलाई गायिका एन्जिलाले यस अघि नै बिस हजार नगद सहयोग गरेकी थिईन ।
मृगौला फेल भएर मृत्यु सँग लडीरहेकी गायिका परियार प्रति सहयोगी मन भएकाहरुलाई कार्यक्रम उपस्थित भई कार्यक्रम सफल तुल्याईदिन आग्रह समेत गरेकी छिन ।
ब्रिटिस काउन्सिलले काठमाडौंमा लिने अंग्रेजी भाषा परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै किनबेच भएको प्रमाणित भएको छ । यसअघि गत २१ पुसमा प्रहरी परिसर, काठमाडौंले सुन्धारामा प्रश्नपत्र लेनदेन हुँदै गर्दा एक कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक र विद्यार्थी सहित १३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २२ पुसमा आईएलटीएस परीक्षाको मिति तोकिएको थियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार आईएलटीएस परीक्षामा सोधिएका प्रश्न र लाखौं रुपैयाँ लिएर ‘लिक’ गरिएको प्रश्नलाई दाँजिएको छ र, अधिकांश प्रश्नहरु मिलेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार आईएलटीएस परीक्षाको प्रश्नपत्रको तीनवटा खण्डमध्ये दुईवटा खण्डको मिलेपछि २२ पुसमा लिइएको परीक्षा रद्द गर्न प्रहरीले पत्र काटेको छ र अदालतमा समेत बुझाएको छ ।
‘हामीले काउन्सिलले प्रश्नपत्र उपलब्ध नगराए अरु परीक्षा पनि रोक्नु पर्ने व्यवहोराको पत्र पठाएका थियौं । त्यसपछि निकै कसरतबाट प्रश्न प्रहरीलाई प्राप्त भयो’, एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘ब्रिटिस काउन्सिलका जिम भनिने एकजना विदेशी नागरिक र आईडीपीका विदुर खड्कीलाई ल्याएर बयानसमेत लियौं । तर, उनीहरुको संलग्नता देखिएन ।’प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका ३ जनाले समेत नेपालस्थित ब्रिटिस काउन्सिलका व्यक्तिको नाम लिएका छैनन् ।
आईईएलटीएस परीक्षाको प्रश्नपत्र आउट भइरहेको छ भन्ने सुराकीका आधारमा २२ पुसमा काठमाडौं प्रहरी परिसरले अपरेशन चलायो । अनुसन्धानका क्रममा सुन्धारास्थित होटल सप्तरङ्गीको कोठा नं। ३१० मा बिहान ४ बजे आर्थिक ‘डिलिङ’ हुँदाहुँदै प्रहरीले १३ जनालाई पक्राउ गर्‍यो ।
झापा घर भई बालुवाटार बस्दै आएका ३९ वर्षीय सुरज लामा, महेन्द्रनगर–७, हल्दुखाल घर भइ काठमाडौंको लैनचौर बस्ने २० वर्षीय गणेशराज उपाध्याय र स्याङ्जाको चापाकोट–९ घर भई हाल काठमाडौंको सामाखुशी बस्दै आएका २० वर्षीय विधान आचार्यबिरुद्ध प्रहरीले ठगी मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । पक्राउ परेका लामा पुलतीसडकमा सञ्चालित नेपाल वल्र्डवाइड एजुकेशन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक हुन् । सुरजले भाइबरमा प्रश्नपत्र पाएपछि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर–७, हल्दुखाल घर भइ काठमाडौंको लैनचौर बस्ने २० वर्षीय गणेशराज उपाध्यायलाई प्रश्नपत्र भाइबरमार्फत पठाएका थिए । र, उपाध्यायले स्याङ्जाको चापाकोट–९ घर भई हाल काठमाडौंको सामाखुशी बस्दै आएका २० वर्षीय विधान आचार्य र रुपन्देहीका निकेश न्यौपानेलाई त्यो प्रश्नपत्र पठाएका थिए ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरुले आईईएलटिएस परीक्षाको प्रश्नपत्र विद्यार्थीलाई दिने प्रलोभन देखाएर १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म लिएका थिए । भारतका काउन्सिल एजेन्ट हनी सिंहले प्रश्नपत्र पठाएको पाइएपछि प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि दिल्ली प्रहरीमा समेत उजुरी हाल्न ब्रिटिस काउन्सिललाई पत्र लेखेको छ ।
१७ माघ, धनगढी । कञ्चनपुरको बेलौरीमा नेेपाली भूमिमा बनेको सडक विस्तारमा भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले अवरोध गरेको छ । बेलौरी नगरपालिकाले वडा नम्बर १० सरघाट क्षेत्रमा सडक विस्तार थालेको थियो । पुरानो सडकलाईर् नगरपालिकाले ग्राभेलका लागि ८ लाख बजेट छुट्याएको छ । तर, ३३ नम्बरदेखि ३६ नम्बर पिल्लर क्षेत्रमा सडक विस्तारमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको मेयर पोतिलाल चौधरीले जानकारी दिए । ६५ वर्षीय कृष्णप्रसाद शर्माले लालपुर्जा देखाउँदै आफ्नो जग्गामा बाटो निर्माण गर्दा एसएसबीले रोकेको बताए । नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गर्दा भारतीय पक्षबाट अवरोध हुनु सरासर दादागिरी भएको स्थानीय पल्लव भट्टले बताए । एसएसबीले भोराकोट क्षेत्रमा पनि करिव १०० मिटर सडक विस्तारमा अवरोध गरेको छ ।
मेयर चौधरीले भने, ‘सीमा पिल्लर भन्दा १०० मिटर परै सडक विस्तार गर्न खोजिएको हो । तर, भारतीय पक्षले अवरोध गर्दा काम हुन सकेको छैन ।’ नगरपालिकाले सीमा सर्वे टोलीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बलका कमाण्डेट (इन्स्पेक्टर) एसके सिंहले विवाद सामान्य भएको बताए । दशगजा मिचेर सडक बनाउन थालेपछि अवरोध गरेको स्विकार गरे । भारतीय पक्षले सीमा विवाद समाधान भएपछि मात्र सडक विस्तार गर्न दिने बताएको छ ।
६ दिन बित्यो, भेटिएनन् जोन
हाइकिङका लागि फूलचोकी गएका ललितपुरस्थित थसिखेलका १७ वर्षीय जोन तामांग हरायको ६ दिन वितिसक्दा समेत भेटिएका छैनन् ।
ललितपुरको थसिखेलस्थित अजय शिक्षा सदनको कक्षा ६ मा अध्ययन गर्ने तामाङ गत बिहीबार साँझदेखि बेपत्ता भएका हुन् । विद्यालयका प्रिन्सिपल दुर्गाबहादुर ओलीसहित ११ जना विद्यार्थी हाइकिङमा गएकोमा फर्किने क्रममा उनी बेपत्ता भएका थिए ।उनको खोजीमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र अभिभावकको टोली खटिएको छन् महानगरीय प्रहरी वृत्त, सातदोबाटोका डिएसपी विनोद सिलवालले विद्यार्थीलाई अहिलेसम्म नभेटिएको बताए । उनका खोजी कार्य जारी छ ।
नरेन्द्र मोदी फागुन अन्तिम साता नेपाल आउने
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फागुन अन्तिम साता नेपाल आउने भएका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । नेपालसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढाउने उदेश्यका साथ उनी नेपाल आउने तयारीमा जुटेका हुन् ।
मोदी भ्रमणको गृहकार्यका सिलसिलामा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज भोली (बिहीबार) काठमाडौं आउँदै छिन् । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार, -भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको तयारीका लागि नै स्वराज नेपाल आउन लाग्नुभएको हो । -मार्चको दोस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सामुहिक बलात्कारमा संलग्न युवती फरार ,किन भागिन् युवती ?
दरबारमार्ग स्थित ल्याण्डमार्क होटलमा भएको भनिएको सामुहिक बलात्कारमा संलग्न युवती फरार भएकी छिन् । माघ ७ गते राती आफ्नो केटा साथीले बोलाएपछि ल्याण्डमार्क होटल पुगेकी युवतीमाथि सामुहिक बलात्कार भएको मौखिक जाहेरीपछि दरबारमार्ग प्रहरीले यसबारे अनुसन्धान गरेको थियो ।
युवतीको बयानका आधारमा पक्राउ परेका शैलेश कार्की र युवतीबीच महानगरीय प्रहरी बृत्त दरबारमार्गका इन्सपेक्टर लक्ष्मण सिंह ठकुरीले कार्यालयबाहिर कागज बनाएर मिलापत्र गराइदिएको प्रहरी स्रोतको भनाई छ । यसरी इन्सपेक्टर ठकुरीले आर्थिक लाभ लिएर कागज गरेको आशंकामा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी रामदत्त जोशीको कमाण्डमा छानविन समिति गठन गरेको छ ।
सोमबार साँझ छानविन समिति बनेपछि एकपटक मात्र प्रहरीसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा आएकी ती युवती अहिले सम्पर्कविहिन भएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रबिन्द्र धानुकले जानकारी दिए । छानविन समितिमा संलग्न एक डिएसपीका अनुसार बलात्कृत भनिएकी युवती काठमाडौं बाहिर गएकी छिन् । महानगरीय अपराध महाशाखाले ती युवतीको खोजी गरिरहेको बताइएको छ ।
किन भागिन् युवती ?
प्रहरी प्रधान कार्यालयले घट्नामा संलग्न दरबारमार्ग वृत्तको मुद्धा शाखामा कार्यरत इन्सपेक्टर लक्ष्मणसिंह ठकुरीलाई नक्सालस्थित १ नम्बर गणमा सरुवा गरेको छ । छानबिन समितिले दरबारमार्ग वृत्तका इन्चार्ज डिएसपी तिलक भारती र मुद्धा शाखामा कार्यरत सई चन्द्र भण्डारीमाथि समेत मिलेमत्तोको आशंकामा अनुसन्धान शुरु गरेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार माघ ७ गते राति ल्याण्डमार्क होटलमा घट्ना घटेपछि प्रहरीले युवतीकै सहयोगमा उनका ब्वाईफ्रेन्ड शैलेश कार्कीलाई बोलाएका थिए ।
शैलेशकी आमाले ती युवतीलाई ‘बुहारी बनाउँछु’ भनेपछि दुवै पक्षका परिवारबीच जाहेरी नदिने बरु विवाह गरिदिने सहमति भएको थियो । त्यसबीचमा युवतीले परिवारका सदस्यलाई जाहेरी दिनबाट रोक्नका लागी शैलेससँग विवाह गर्न नपाए ‘आत्महत्या गर्ने’ धम्की दिएकी थिइन् ।
त्यतिन्जेल सामुहिक बलात्कारमा संलग्न अन्य तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिनेतिर प्रहरीको ध्यानै गएन । युवतीले ‘आत्महत्या गर्न सक्ने’ डर देखाएर इन्सपेक्टर ठकुरीले कार्यालय प्रमुख डिएसपी भारतीलाई मुद्धा नचलाउन आग्रह गरेको दरबारमार्ग वृत्तमा कार्यरत एक जुनियर अधिकृतले जानकारी दिएका छन् । ठकुरीको आग्रहपछि डिएसपी भारतीले चार पटकसम्म ‘पछि केही समस्या त आउँदैन नि रु’ भन्दै प्रश्न गरे । त्यस्तोमा मुद्धा शाखामा कार्यरत सई चन्द्र भण्डारी र इन्सपेक्टर ठकुरीले जाहेरीनै नभएपछि कसरी समस्या आउँछ भन्दै कन्भिस गरेका थिए ।
‘त्यसपछि ठकुरी आर्थिक बार्गेनिङ गर्न र कागज नबनाई नहुने भन्दै ललितपुरस्थित युवतीको कोठामै पुगेका थिए’ ती जुनियर अधिकृतले भने, ‘युवतीको ब्वाईफ्रेण्डलाई समेत बोलाएर इन्सपेक्टरले झम्सीखेलमै कागज गरेका थिए, तर त्यो काजग अफिसियल थिएन् ।’
ब्वाईफ्रेन्ड शैलेश कार्की र अन्य तीनजना युवासँग पनि आर्थिक लाभ लिएर युवतीले जाहेरी नदिएको हुनाले छानविन हुँदा आफैं फस्ने डरले युवती भागेको हुनसक्ने प्रहरी स्रोतको भनाई छ । सामुहिक बलात्कारमा संलग्न विकास गौतम, रवि पौडेल र दिपक श्रेष्ठ निर्माण ब्यावसायी हुन् । उनीहरुलाई इन्सपेक्टर ठकुरीले तर्साएर युवतीलाई पनि मोटो रकम दिलाइदिएको र आफुले पनि आर्थिक लाभ लिएको दरबारमार्ग वृत्तका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।
फेसबुकमार्फत चिनजान भएकी युवतीलाई कमलादीको ल्याण्डमार्क होटलमा बोलाएका शैलेश कार्कीले चारवटा कोठा लिएका थिए । ल्याण्डमार्क होटलमा एउटा कोठाको एकरातको मूल्य पाँचहजार पर्छ ।